अनि पट्नाबाट ट्रेन चढियो [भाग-५] #Train #Patna
Aakar Anil July 02, 2011
आफ्नो ट्रेन को नाम थियो, दरभंगाबाट बेङ्लोर चल्ने ‘बाग्मती एक्सप्रेस’ ! ‘बाग्मती एक्सप्रेस’ हप्ता मा एकपटक मात्र चल्ने रहेछ, बाँकी दिन पट्नाबाट ‘संघमित्र एक्सप्रेस’ चल्ने रहेछ । ‘स्लिपर क्लास’ मा जाने यात्रुहरु भएको ठाउँमा गएर बसेँ । त्यस प्रतिक्षालयमा बस्न नाम, ठेगाना, ट्रेन नम्बर सबै टिपाउनु पर्ने रहेछ, भित्रै बाथरुम पनि रहेछ ।
म सँगै एउटा केटा पनि थियो, उ पनि बारम्बार भित्ता मा टाँगिएको मनिटरमा हेर्थ्यो । राती १२ बजेसम्म छुट्ने ट्रेन को नाम दिइसक्यो, आफ्नु ८:२० मा छुट्ने भनेको ट्रेन को कुनै अत्तोपत्तो छैन । सायद, उसको मुखबाट कुनै बेला ‘बाग्मती’ भन्ने शब्द सुनेको थिँए होला, धेरै बेर आफू चुपचाप एक्लै रहेको मैले उसलाई एक्कासी सोधेँ । “आपका भि बाग्मती एक्सप्रेस हे क्या” – मैले सोधेँ । “हाँ, बाग्मती एक्सप्रेस ही है” – उसले जवाफ दियो । उसलाई जवलपुर भन्ने ठाउँ जानुपर्ने रहेछ । पट्नाबाट उसको दिउँसो को ट्रेन रहेछ, तर १५ मिनेट ढिलो भएर ट्रेन छुट्यो भन्दै निन्याउरो अनुहार लाएर उ बसिरहेको थियो । गंगा नदी माथि भएको पुल मा जाम मा पर्दा, उसको ट्रेन छुटेको रहेछ । अनि उसले त्यो ट्रेन को टिकट ‘क्यान्सिल’ गरेर, अर्को ट्रेन को टिकट को लागि आवेदन दिएको रहेछ । त्यही भएर उसको टिकट ‘वेटिङ लिस्ट’ मा रहेछ, “बाग्मती एक्सप्रेस” को टिकट पाइन्छ भन्ने झिनो आशा लिएर उ बसेको थियो ।
कोठामा दर्जन भन्दा मान्छेहरु थिए, अनि एउटा मान्छे को घटिमा पनि दुइवटा ठूला ठूला सुटकेश थिए । उक्त केटा पनि ‘बाग्मती एक्सप्रेस’ मै जाने भएकोले, उ सँगै यस्तै, त्यस्तै गफ गर्दै बसियो । राम्री राम्री केटीहरु आउँदा, आँखा सन्काएर मलाई देखाउँथ्यो । मैले उसलाई टिकट कन्फर्म हो भनेर सोध्दा भने, अनुहार निन्याउरो बनाउँथ्यो, खै जान पाइएला जस्तो छैन भन्थ्यो । बेलुका ७ बज्दा सम्म पनि, ट्रेन को कुनै अत्तोपत्तो थिएन, विभिन्न ठाउँमा जाने ट्रेन ‘डिले’ भएको र ‘क्यान्सिल’ भएको कुरा, पट्ना स्टेशन ले फुकेको फुकेकै थियो, अत: आफ्नो ट्रेन पनि त्यसै भयो कि जस्तो लाग्न थाल्यो । राती १ बजेसम्म को ट्रेन को ‘सेड्युल’ मोनिटरमा ‘डिस्प्ले’ गरिरहेको छ, तर आफू जाने ट्रेन को कुनै संकेत छैन ।
दुविधा त तब भयो, जब संघमित्र नाम गरेको ट्रेन, हाम्रो ट्रेन छुट्ने समयमै पट्नाबाट छुट्यो । फेरि संघमित्र एक्सप्रेस, मंगलबार को दिन नछुट्ने कुरा थियो । मलाई लाग्यो, बाग्मती एक्सप्रेस को सट्टामा संघमित्र जाने भएछ । तर खै, कसैले केही भनेकै छैन, त्यस्तो त नहुनु पर्ने हो जस्तो लाग्यो । संघमित्र एक्सप्रेस नामक ट्रेन बेङ्लोर को लागि छुट्यो । मन मा दुविधा थियो, त्यही पनि बाग्मती एक्सप्रेस भन्या दरभंगाबाट आउने ट्रेन भनेर थाहा भएका कारण, बाटो मा आउँदै होला भन्ने लाग्यो । मैले छेउकै होटलमा गएर खाना खाँए ।
हामी बसेको कोठा क्रमश खालि हुँदै थियो, सबैको ट्रेन आउँदै जाँदै थियो । त्यही अनुसार मान्छेहरु पनि क्रमश घट्दै थिए । अनि प्लेटफार्म मा चाँहि फेरि मानवसागर उर्लेको थियो । ट्रेन बाट झरेका यात्रुहरु, सबै भुइमा लम्पसार परिसकेका थिए । अघिसम्म म सँग बोलिरहेको र केही हदसम्म साथि बनिसकेको त्यो केटा पनि ट्रेन आएन भनेर सुतिसकेको थियो । बल्लबल्ल ट्रेन आउने समय मोनिटरमा देखियो तर त्यो पनि ३ पटक ‘डिले’ भयो । ८:२० मा भनेको ट्रेन बल्लतल्ल ११ बजेतिर, पट्ना आइपुग्न लाग्यो भनेर माइकिङ गर्यो । मन दंग र फुरुङ्ग भो । अब पुगिन्छ भन्ने भो, तर ८ वटा प्लेटफार्म मध्ये कुन मा जाने अझै माइकिङ भएको थिएन । ट्रेन आइपुग्नै लाग्दा, माइकिङ भयो ४ नम्बर प्लेटफार्म पर जाइए भनेर ।
१ नम्बर प्लेटफार्म मा भएको हामी, ४ नम्बरमा पुग्न २-३ मिनेट जति लाग्थ्यो, ओभरहेड ब्रिज चढेर जानुपर्थ्यो । मैले, त्यो मेरो साथिलाई ब्युँझाए, चलो ट्रेन आ’गया ! उ उठ्यो र मेरो पछि पछि लाग्यो । तर भिड मा म अगाडि भएँ, मलाई सकेसम्म चाँडो प्लेटफार्म नम्बर ४ मा पुग्नुथियो । अनि त्यहाँ पनि आफ्नो ‘स्लिपर’ को ३ नम्बर डब्बा खोज्नु थियो । प्लेटफार्म नम्बर ४ मा पुगेको केही समयपछि ट्रेन आयो । आफ्नो डिब्बा, अगाडि बाट यस्तै ६-७ नम्बर मा रहेछ । ३ नम्बर डब्बा लेखेको देख्ने बित्तिकै त्यही डब्बा को पछि पछि दौडिँए, ट्रेन रोकियो ।
३ नम्बर डब्बा भित्र आफ्नो १७ नम्बर सिट खोज्दै अगाडि को ढोका बाट छिरेँ । मैले पहिलोपटक ट्रेन छोएको थिँए । दिउँसो साथि बनाएको त्यो जवलपुर जाने साथि कता पुग्यो, थाहा भएन र मलाई वास्ता पनि भएन । मलाई बेङ्लोर पुग्नु थियो, मेरो ट्रेन आइसकेको थियो र म आफ्नो सिटमा बस्न जाँदै थिए । मेरो सिटमा एकजना बसिरहेको रै’छ । मैले यो मेरो सिट हो भनेँ । उसले भन्यो, ‘हामी अगाडि को स्टेशन मा झर्ने हो’ । मैले कन्फर्म गर्नलाई सोधेँ, अगाडि कै स्टेशनमा हो । उसले हो भन्यो । मैले सोचेँ बसेर आएको मान्छेलाई के उठाउनु, आखिर मलाई पनि अहिले सुतिहाल्नुपर्ने थिएन । मैले भनेँ, ल ठिकै छ, बस्दा हुन्छ । आफ्नो झोलालाई आफूसँगै छेउमा राखेँ, झ्यालपट्टि ।
अर्को पट्टि को सिटमा एउटा मान्छे सुतिरहेको रै’छ । अनि त्यो भन्दा पर्तिर को सिटमा एउटी आइमाई रै’छे । म आफ्नो सिटमा बसिसकेको थिँए । अरु ३ जना आइपुगे, सिट नम्बर १८,१९ र २० भएका । उनीहरुको २० नम्बर को सिटमा त्यो मान्छे सुतेको रै’छ । उनीहरुले ‘ये हमारा सिट है’ भने । उसले भन्यो, ‘मेरा सिट पिछे है’ उसले अर्को ‘सिट तिर देखाउँदै भन्यो, ‘ओ मेरी बिबी है, इसलिए मे यहाँ सोरहाहुँ’ । आप मेरे सिटमे जाइए’ । ३ जना को समूहमा आएका उनीहरु के मान्थे । ‘हुँदैन हुँदैन’ भनेर उसलाई उठाए । ती ३ जना त आपसमा नेपाली मा गफ गरिरहेका थिए । उनीहरुले मलाई सोधे, ‘आप का सिट कौन सा है”, मैले भनेँ ‘१७’ । त्यो अर्को मान्छेले मलाई ‘आप पिछे जाइए भन्यो’ ।
ती ३ जना नेपाली नै हुन् भन्ने कुरा मैले सुइँको पाइसकेको थिँए । अनि नेपाली साथी छोडेर म किन पछाडि सिटमा जान्थेँ र? अनि ती ३ जना ले पनि, म पनि नेपाली हो भन्ने थाहा पाउन भनेर, त्यो मान्छेलाई मैले नेपाली मै जवाफ दिए, “म पछाडी जान्न, यहिँ बस्छु” । फेरि भनेँ, ‘मे यहीँ पर रहुंगा’ । त्यो अघि को मान्छे उठ्यो, मेरो सिटमा बसेको मान्छे नि उठेर गयो । ती ३ जना मध्ये को १ जनाले भन्नुभो, ‘ए लौ, भाइ पनि नेपाली नै पो परेछन्’ । कुरा बुझ्दा थाहा भयो, उनीहरु पनि बेङ्लोर नै जाँदै रहेछन् ।
सामान्य कुराकानी पछि, २ जना दाइहरुले दालमोठ निकालेर, ह्विस्कि निले । मैले दालमोठ मात्र खाँए । छोरालाई बेङलोर मा कलेज मा भर्ना गर्न को लागि उनीहरु बेङ्लोर जाँदै रहेछन् । ट्रेन अघि बढ्यो, म झ्यालबाट बाहिर हेर्दै ट्रेन को अनुभव बटुलिरहेको थिँए । ३ जना नेपाली साथीहरु सँगै को सिटमा भेटिएपछि र हाउभाउ र कुराकानीबाट उनीहरु नराम्रा मान्छे हैनन् भन्ने थाहा पाएपछि, बेङ्लोर पुगिने कुरा मा ढुक्क भएँ । मलाई फेरि १ पटक घरमा, ट्रेन चढेँ, साथीहरु भेटेँ भनेर फोन गर्न मन लाग्यो । तर विडम्वना आफूसँग फोन थिएन । अनि अघि दिउँसो बनाएको साथी पनि, मेरो सिट नम्बर खोज्दै खोज्दै बस्न पाइन्छ की भन्ने आशले आइपुगेछ ।
उसले भन्यो, ‘टिकट वेटिङ’ मै छ । अब ‘टिटि’लाई भनेर मिलाउनु पर्ला । उसलाई बस्ने इशारा गरेँ, उ पनि सिटमा बस्यो । अनि १९ नम्बर सिटमा डबल प्यासेन्जर परेछन् । ‘टिटी’ ले पैसो खाएर ‘वेटिङ’ मा भएकोलाई पनि टिकट दिएछ भनेर कुरा चल्यो । हामी ४ जनाले १७,१८,१९ र २० नम्बर को सिट नछोड्ने भयौँ, आत्मबल पनि बढेको थियो । केही छिन को भलाकुसारी पछि, अब सुत्नुपर्छ भन्ने कुराकानी भयो । तखता, तखता भएको सिटलाई झुन्ड्याइयो । अनि त्यही दिउँसो स्टेशनमा बनाइएको साथिले भन्यो, ‘आप भि सोजाइए’ । उसले फेरि सोध्यो, ‘आपके पास पेपर है’ । मैले झोला को खल्तिमा घुसारेर राखेको, टाइम्स अफ इन्डिया दिएँ । उसले त्यो पत्रिका भुँइमा ओच्छ्याएर सुत्यो । एकछिन पछि ‘टिटि’ आएर टिकट ‘चेक’ गर्यो । ट्रेन कुदिरहेको थियो, सबैलाई गुडनाइट भनेर, १ बजे तिर सुतियो ।